စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကုန်ချောတွေထုတ်မယ့် နမ်ကျင်စီ...
9 ต.ค. 2562 - 00:43 น.
ကချင်လူမှုစီးပွား တိုးတက်ရေး နမ်ကျင် စီးပွားရေးဇုန် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရ မျှော်လင့်
တခါ၊ မွေးမြူရေး သမားတွေ အတွက် ဆိုရင်လည်း အမဲ၊ ကြက် အစရှိသဖြင့် အသားတွေကို နိုင်ငံခြားပို့ကုန် အရည်အသွေး စီချိန်မှီ စနစ်တကျ ထုတ်ပိုးပြီးမှ တင်ပို့နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်း ဦးဝေလင်းက ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနား မြို့ အနီးမှာ တရုတ်နဲ့ဖက်စပ် စီးပွားရေးဇုန် တစ်ခု ဖော်ဆောင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေလကတည်း နားလည်မှု စာချွန်လွှာ MoU လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ရှည် စိုက်ပျိုးမြေတွေ အဖြစ် လျှောက်ထားရယူ ထားပေမယ့် တကယ်တမ်း ဘာမှ စိုက်မထားတဲ့ မြေတွေကို ပြန်သိမ်တာမျိုး၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေ ရှိနေတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း လျော်ကြေးပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင် ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီ ဧက ၄၇ဝဝ ဆိုတဲ့ မြေပမာဏကို ဖော်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဝေလင်းက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဦးဆောင်တဲ့ တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် ပထမ သက်တမ်း နှစ်နှစ်ခွဲတာ အတွင်းမှာ ပြည်နယ် အတွင်း လန်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လျှပ်စစ်မီး တို့လို အခြေခံ အဆောက်အဦတွေ တည်ဆောက်ရေးကို အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါက်တာ ခက်အောင်က ပြောပါတယ်။
မြစ်စုံရပ်ထားချိန် တရုတ်ရဲ့ တခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတော့ ကချင်မှာ ရှိနေ
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အဲဒီ ကန်ပိုင်တီ စခန်းမှာလည်း ကုန်စည် စီးစင်းမှု ပိုပြီး မြန်ဆန်ချောမွေ့အောင် ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ စက်ကိရိယာတွေကို နည်းပညာ မြှင့်တာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိသလို၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် အခွန်လွတ်ဇုန် ထူထောင်ထားရှိဖို့လည်း ဦးတည် လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ကုန်ချောတွေထုတ်မယ့် နမ်ကျင်စီးပွားရေးဇုန်